लङ रुटमा ड्राइभर फेर्ने कुरामा आश्चर्य मान्नु हुँदैन – वर्षमान पुन ‘अनन्त’ - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौं । नेकपा स्थायी समिति सदस्य तथा उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले सरकारको नेतृत्व फेरिनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
कान्तिपुर दैनिकसँगको एक अन्तर्वार्तामा मन्त्री पुनले संकटको बेला आँट गर्ने हो भने नेतृत्व परिवर्तन गर्न सकिने बताएका हुन ।
‘सरकारले गति नै नलिएको हो भने अब ड्राइभर नै फेरिदिने हो रु’ भन्ने प्रश्नमा नेता पुनले कोरोना संकटका कारण चालक फेरेर सजिलै जान नसकिने र जस नआउउने भएपनि कोशिस गरौं भन्न सकिने बताएका हुन । “कोरोना संकटका कारण ड्राइभर फेरेर पनि सजिलै जान सकिँदैन, जसरी ड्राइभिङ गरे पनि जस आउँदैन ।’ उनले भने, “होइन, संकटका बेला आँट्छु भन्ने हो भने ट्राई गरेर हेरौं भन्न पनि सकिन्छ । लङ रुटमा जाँदा ड्राइभरहरूले पालैपालो चलाए पनि हुन्छ । लङ रुटमा ड्राइभर फेर्ने कुरा हुँदा आश्चर्य मान्नु हुँदैन ।”
नेकपा संकटको निकास सहमतिबाट खोज्नुपर्नेमा जोड दिँदै नेता पुनले प्रधानमन्त्री र उनको टीम अरु पक्षसँग असहिष्णु भएको आरोप समेत लगाएका छन् ।
खासगरी प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट माओवादी समूह भन्दै अपमानजनक भाषा प्रयोग गरेर आलोचना गरिएको उनको टिप्पणी छ ।
“त्यत्रो युद्ध, गणतन्त्र, संघीयता, लोकतन्त्र, समावेशिता र सामाजिक न्यायका लागि लडेकै हो, त्यसै कसैले टिपेर ल्याएको होइन । साथीभाइले नामै लिएर अपमान गर्ने ढंगले बोलेको सुन्दा लाग्छ, साथीहरू के सँगै बस्न नचाहेको हो रु अब सकिँदैन भन्ने निष्कर्षमा हो रु”उनलृ भनृका छन, “इतिहासको आवश्यकताले पार्टी एकता भएको हो । दुवै पार्टीले बहुमत शासन, अल्पमतको प्रतिपक्ष, सामाजिक न्यायिकसम्मका कुरा स्वीकार गरिसकेपछि, नेपालमा सामन्तवादविरुद्धको जनवादी क्रान्ति पूरा भयो र अब विकास समृद्धि सुशासनको युगमा प्रवेश गरिसक्यौं भनेर एउटै राजनीतिक वैचारिक ग्राउन्डमा पुगेपछि हामी एक ठाउँमा आएका हौं ।”
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले एमालेसँग एकता नभएको भए माओवादी र प्रचण्डको हविगत के हुन्थ्यो भनेर बारम्बार आलोचना गर्ने कुरामा मन्त्री पुनले आपत्ती जनाएका छन् । उनले भनेका छनः
“तर प्रधानमन्त्रीकै सल्लाहकारहरूले आधा सिट मात्रै आउँछ, अब हारिन्छ, प्रचण्ड आफैं पनि हार्ने भइसकेपछि यहाँ एकता गरेको हो, प्रधानमन्त्रीको किड्नी ट्रान्सप्लान्ट सक्सेस हुँदैन, एमालेलाई गुटमुटाउँछु भनेर आएको भनेर एकदम गम्भीर प्रकारको आक्षेप आउँदा के त्यस्तो पनि तर्क गर्न सकिन्छ भन्ने त लागेको छ । तत्कालीन माओवादीको स्थानीय तहमा १६ लाख भोट थियो ।
तत्कालीन एमाले र कांग्रेसबीच एक सिटको मात्रै फरक छ आजको मितिमा पनि । त्यो १६ लाख स्थानीय तहको मत र पछि समानुपातिकमा १३ लाख प्लस छ किनभने त्यहाँ समानुपातिकमा उम्मेदवारी नै छैन । स्वाभाविक दुई–तीन लाख त तलमाथि हुन्छ । त्यसो त तत्कालीन एमालेमा पनि घटेको छ, माओवादीमा पनि घटेको स्विकारेका छौं । एउटा मात्रै उदाहरण दिन्छु, तत्कालीन एमालेको असाध्यै राम्रो भनेर तेह्रथुममा संघ र दुवै प्रदेशमा तत्कालीन एमालेको उम्मेदवारी स्वीकार गरिएको थियो । त्यहाँ तीनै सिटमा माओवादीको ६ हजार प्लस भोट छ, तिनै सिटमा निर्णायक भोट छ । माओवादीको भोटले गर्दा ६ प्रदेशमा बहुमत छ, माओवादी थिएन भने एउटामा पनि आउँदैनथ्यो ।
संघमा एक सिट समानुपातिक फरक छ भने कांग्रेस एक–दुई सिट माथि हुन्थ्यो कि तत्कालीन एमाले एक दुई सिट माथि हुन्थ्यो । सबै ठाउँमा माओवादीको समानुपातिक भोट हेर्दा पनि देखिन्छ । तर यस्तो ठूलो अहंकार ? कसरी एउटै पार्टीमा बस्न सकिन्छ त नि रु एउटै पार्टीमा बस्ने खालको व्यवहार हो त रु त्यो पनि प्रधानमन्त्रीकै सल्लाहकारबाट । प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्ताले सल्लाह दिएपछि सरकार कसरी चल्दो होलाजस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ । कसरी पार्टी चल्छ, कसरी नेताहरूको सम्बन्ध सुमधुर हुन्छ जस्तो लाग्छ । जो नेताको सबैभन्दा नजिक बस्छ, उसले त गम्भीरतापूर्वक संयमपूर्वक व्यवहार गर्नुपर्ने हो । रिसै उठे पनि झोंकै चले पनि मिल्नुस् है बिस्तारै गर्नुस् है, पख्नुस् जनताले यसो भन्छन् भन्नुपर्ने ठाउँमा प्रभोक गर्दै, सचिवालयमै बसेको मान्छेले अर्को अध्यक्षलाई तथानाम भन्दै हिँड्न मिल्छ ? प्रचण्ड–माधव नेपालको सचिवालयले त्यस्तै गरे के हुन्छ ? यो निकै गम्भीर विषय हो ।”
ट्याग्स: नेकपा विवाद, वर्षमान पुन ‘अनन्त’, सचिवालय बैठक